Wasiir Goodax oo faahfaahiyay sidda uu dhacayo Imtixaanka Shihaadiga ah - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Wasiir Goodax oo faahfaahiyay sidda uu dhacayo Imtixaanka Shihaadiga ah
Wasiirka Wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa shaaciyay xilliga rasmiga ah ee la qaadi doono imtixaanada kala duwan ee dalka gaar ahaan kuwo dugsiyadda dhexe iyo Sare.
Wasiirka ayaa sheegay in ka dib markii Wadatashiyo kala duwan ay la qaateen qeybaha kala duwan bulshadda in ay isku raaceen in 11 bishaan la qaado Imtixaanka dugsiyadda Dhexe halka dugsiyadda Sare la qaado 18 Bishaan.
Waxaa sidoo kale la kordhiyay dhammaan xarumaha kala duwan imtixaanka lagu galaayo si looga hortaggo Cudurka Corona Virus.
Waxaa sidoo kale 15 Bisha Agoosto dib loo furi doona Iskuullada halka Jaamacaddaha la furi doono 5 Bisha Sebtamber.
Previous articleTaiwan oo wakiil u soo Magacowday Somaliland